ဗုဒ္ဓဘာသာနော် . . ဗမာမတွေနဲ့ ပေးစားလိုက်လို့ ထွက်လာမယ့်မျိုးဆက်က အမျိုးစောင့်ပြီးသားထွက်လာနိုင်မှာလားဒီလောက်ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့အစိုးရ
Koko Kokokhaylove သောက်ဥပဒေ သောက်ဇယားကိုရှုပ်နေတာပဲ သု့ အမေကလွှားထဲမှပဲ night club တွေ မာဆပ်တွေပေါနေတာ အပြိုင်တောင်မလိုဘူးအေးရာအေးကြောင်း လုပ်နေတာ ဘယ်ဥပဒေနဲ့ပုဒ်မတပ်မလဲ သောက်လုပ်မရှိ ခွေးသွားတိုက် ကြောင်အမွှေးရေနေတာ လုပ်စရာ ရှားသွားပီ
လူသတ်မီးရှို့ မုဒိန်းကျ ရှုးချင်ယောင်ဆောင် လိုတိုးပိုလျှော့ ဥပဒေ ဘာဥပဒေထုတ်ထုတ် ဘာမှသောက်ဖြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆင်ဖမ်းမယ်ကျားဖမ်းမယ်နဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်ကတောင်ဖင်ဖြဲပြသွားမယ်
ငတုံးတွေ လဒူတွေ စာမဖတ်တဲ့ သူတွေ မျက်ကန်းတွေပဲ water follow fish follow ကျုပ်တို့ တော့ဘယ်ဥပဒေထုတ် အမြင်ကပ်ပုဒ်မကြောက်နေရလို့သောက်ထင်လဲမကြီးဘူး သောက်အားလဲမပေးဘူး ထွီ!!!
Win Maw မှန်တယ်ကိုဘရန်းဆိုင်းရေမယားငယ်လိုချင်လို့ မယားကြီးတွေနှိပ်စက်ခံရတော့မယ်တိတ်ပုန်းမယားတွေများလာတော့မယ်ဥပဒေ ရေးဆွဲတဲ့ကောင်က မျက်စိတစ်ဆုံးမကြည့်ဘဲရေးဆွဲတော့ နောင်ဖြစ်လာမယ့်ဆိုးကျိုးတွေမိန်းကလေးတွေခံစားရတော့မယ် ။ ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကလဲကြိုးချည်ထားလေ ရုန်းချင်လေဘဲ
This entry was posted on December 4, 2014 at 4:48 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.